देउवाले जथाभावी पदक बाँडेर पदककै बेइज्जत गरे : ओली - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
देउवाले जथाभावी पदक बाँडेर पदककै बेइज्जत गरे : ओली
काठमाडौं, ५ असोज । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जथाभावी पदक बाँडेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । श्वेतशार्दूल (मदन भण्डारी) पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विरोध गर्ने सबै निकायलाई पदक दिएर पदककै बेइज्जत गरेको उल्लेख गरे ।
‘अस्तिको दिनको जस्तो पदक वितरण हामीले गरेको भए बा बा । अहिले निर्णय खारेज गर्ने अदालतलाई दिएको छ, बहस गर्ने वकिललाई दिएको छ । कसले रोकोस् ? विरोध गर्ने अखबार टेलिभिजनलाई दिएको छ । कस्तो सबैतिर ढ्याक्ढ्याक्ती आवाज नआओस भनेर थुनेको छ । विरोधी नै रहेनन् । रत्नपार्कमा बसेर वितरण गरेजस्तै छ भन्या । म प्रधानमन्त्री भएको बेला गरेको भए के हुन्थ्यो ? बुद्धिजिवी, नागरिक समाज के भन्थ्यो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
ओलीले सबैलाई पुर्‍याएर पदक बाँड्न माहोल शान्त रहेको उल्लेख गरे । ‘आज रमाइलो छ । सञ्चो छ । शान्त छ । किनकि विरोध गर्ने कोही छैन । यो एउटामात्र उदाहरण हो । यस्ता कति हो कति ? यी ७०/७२ दिनमा छाँटकाँट राम्रो छैन । नयाँ पंक्तिमा वितृष्णा जगाउने काम भएको छ । पत्रकार वकिल सबैलाई पदक बाँडेको छ,’ उनले भने ।
पदक बोल्न सक्ने विरोध गर्ने र आँखा भएको भए रोएर आँशु खसाल्ने अवस्था रहेको ओलीको भनाइ थियो । ‘पदक बोल्न जान्थ्यो भने विरोध गर्थ्यो । त्यसका आँखा हुन्थे भने बरबर रुन्थ्यो । आँशु खसाउन बाध्य हुन्थ्यो । तर उ बाध्य छ जसको घाटीमा पनि झुण्डिन । कति लाज मान्दो होला,’ उनले भने ।
अहिलेको पदक वितरण मदन भण्डारीले देखाएको बाटो नभएको र यो विपरीतको बाटो भएको उनको भनाइ थियो ।